China Omenala Logo Long uwe Women'S Hoodie PY-WW003 rụpụta na Factory | Pinyan
Solid agba sweta nwoke na nwanyị di na nwunye sweta omenala biri ebi logo hoodie
Kedu ụdị akwa ịhọrọ maka ịkpụzi oyi sweta? Ihe omuma nke udiri ahaziri maka Hoodie
Na Hoodie ahaziri, enwere akwa dị iche iche ka anyị họrọ site n'ahịa, mana kedu ụdị ụdị Hoodie bụ akwa na-adọrọ adọrọ karị ma na-eku ume? T Club customization ga-eme ka ị ghọta ọnọdụ nke akwa Hoodie n'ahịa.
Uwe ejiji nke sweta - cashmere fabric
Cashmere n'onwe ya abughi okwu eji eme ihe, kama aha eji eme ihe maka ahia. Ihe mere eji akpo ya cashmere bu na obu ya wuru ego, ya mere ana akpo ya cashmere, obughi aji aturu. Cashmere adịghị oke ọnụ dịka ntutu atụrụ, mana ọ nwere mmetụta dị mma na-ekpo ọkụ, nke na-erughị ntutu atụrụ. Ya mere, a na-ejikarị ya na ụlọ ọrụ akwa. Ọ bụ oke nke ọtụtụ ndị ọrụ iji hazie Hoodie. Ọ bụkwa ejiji ka ị ga-eji kpoo ọkụ.
Uwe ejiji akwa - akwa owu di ocha
A na-eji owu na-eme ka owu ghara isi. Cotton fiber nwere ezigbo hygroscopicity, ọrụ dị mma dị jụụ, nwere ike ịmịkọrọ ọsụsọ ma mee ka anụ ahụ dị ọhụrụ. Uwe ndị e ji ezigbo owu mee na-adị ezigbo nro. Ọcha owu akwa dị ọcha na-abụkarị akọrọ na aka, ìhè dị arọ, ma nwee ikike ikuku dị mma. Ha na-enwe mmetụta dị jụụ na ahụ ma dị mma maka ịme uwe n'oge okpomọkụ. Otú ọ dị, akwa owu na-adị ọcha nwere otu uru kasịnụ, ya bụ, ịmị ọkụ ọsụsọ na ikuku ikuku. Naanị ọghọm dị na ya bụ na ha dị nro.
Uwe ejiji maka sweta - pola ajị anụ
Pola ajị anụ bụ ụdị akwa ejiri akwa. Ọ bụ obere Yuanbao kpara Ọdịdị, nke a kpara na a nnukwu okirikiri igwe. Mgbe ịchachara, a na-ebu ụzọ esiji ákwà isi awọ, wee mezie ya site na usoro dị iche iche dị mgbagwoju anya dị ka ntanye, kaadị, ịkwa afụ na pelleting. A na-ehicha ihu n'akụkụ akwa ahụ, na ọka na-ama jijiji na-adị mma ma sie ike, ọ dịghịkwa mfe ịwụfu ajị anụ na pilling, na azụ azụ dị ntakịrị na ọbụna, Short villi, ederede doro anya na ekwesighi ike. Ihe ndi ozo bu polyester, obi di nro.
Abovedị ụdị atọ nke Hoodie dị n'elu bụ ezigbo ajirija na-eku ume na akwa ume na-eku ume maka mkpuchi ahaziri iche; maka ozi ndị ọzọ gbasara nhọpụta akwa nke nhicha ahaziri ahaziri na ndị enyi nke hoodies ahaziri, biko kpọtụrụ t Club Customization online ahịa ọrụ.
Thin hooded sweta ka nke 50% polyester fiber na 50% owu. Ọ bụ ahunsenwu na-eguzogide ọgwụ na-eyi na-eguzogide. Ọ nwere ezigbo elasticity na akụkụ kwụsie ike. Ọ dịghị mfe ịkwanye na ọkụ eletrik ọkụ. Combed akwa, bụ akwa ọzọ oké, kọmpat. Ọ nwere ike na-eyi ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwanyị. I nwekwara ike hazie ụkpụrụ, agba na logo.
Tụkwasịnụ Type: OEM ọrụ Ebe nke Si Malite: Jiangxi, China
Aha ika: PINGYANGYU Nọmba Onyenwe Anyị: PY-WW003
Ricdị ricdị: Ngwakọta ngwakọta Njirimara: Ngwa ngwa, Mgbochi, Mgbochi, Na-enweghị okpu
Ihe: 50% Polyester，50% Technics owu: Ebipụtara
Design: agbakọta Oge: Mgbụsị akwụkwọ
Dị: Uwe Ego Ogologo Ogologo: Ndị ọzọ Typedị :dị: Sdị Sleeve siri ike: Ndị ọzọ
Olu akwa: V-olu Arọ: 350g
Anya Ogologo (cm): Fullbọchị 7 zuru ezu iji mee ka oge na-eduga: Nkwado
Aha ngwaahịa: Omenala daa loose v-neck sweatshirt Typedị ngwaahịa: sweatshirt ụmụ nwanyị
Keywords: oversized sweatshirt ụmụ nwanyị Gender: Girl Lady Women
Akara: Ahaziri Akara Mpempe Akwụkwọ: Causal Wear
Nkebi: OEM Ọrụ Omenala Ọrụ: Nha Omenala
Ọrụ: Omenala OEM ODM Nkọwapụta: Omenala Mere Ekike
A: Ee, Onye Okike anyị nwere ihe karịrị afọ 5 nke ahụmịhe na-arụ ọrụ na ahịa ahịa ejiji Europe na America na nhazi, mmepe na usoro mmepụta.
Ajụjụ: Banyere nha na agba.
A: Nabata nhazi.
Q: Gịnị bụ eluigwe na ala ụzọ-oge maka iji nnyefe?
A: Obere mmepụta: 5-7 ụbọchị Mass mmepụta: 7-15days ma ọ bụ dabere na gị qty.
A: Magburu onwe ngwaahịa (pụrụ iche imewe, tupu ebi akwụkwọ igwe, nlezianya àgwà akara) Factory
ire ere (ọnụ ahịa dị mma na asọmpi) Nnukwu ọrụ (OEM, ODM, mgbe emechara ọrụ, nnyefe ọsọ ọsọ) Ndụmọdụ azụmaahịa ndị ọkachamara.
Nke gara aga: Akara Akara Akara Akara Rew Neck Women Sweatshirt PY-WH001
Osote: Drawstring Thicken Long Sleeve Women'S Hoodie PY-WW004
Loose Na vasatail Splicing Mid-Ogologo Women H ...
Mbipụta Loose Trend Mmiri Womenmụ nwanyị Hoodie PY-WW002
Drawstring Thicken Long uwe Women'S Ho ...